Noocyo yaanyo | December 2019
Yield iyo badan-fruited: kala duwan Honey badbaadiyey yaanyada
Tomato waa mid ka mid ah dalagyada beerta ugu soo jiidashada-ugu dambeeya, noocyo kala duwan oo kaliya ayaa buuxiya darajooyinka taageerayaasha. Maqaalkani waxaan ku baran doonaa noocyada kala duwan ee yaanyada jaalaha ah ee leh magaca 'xiisaha malab', ka wada hadla sifooyinka iyo sharaxaadda tayada dhadhanka ah ee kala duwan, faa'iidooyinka iyo faa'iido darrada geedka. Xulashada "Honey Spas" - natiijada ka soo baxda shaqada Novosibirsk; noocyada kala duwan waxaa loo soo bandhigay sida yaanyo badan oo jajab ah oo ay ku koraan dhul furan, oo lagu koriyo oo lagu koriyo.
Tafaasiisha, sawirada, tafaasiirta yaryar ee yurubiyanka Rio Grande
Markaad rabto inaad doorato noocyo kala duwan oo yaanyo ah si aad u sii kordhisid sawirkaada, waxyaabo badan ayaa saameynaya doorashadaada: ujeedada dalagga, dhalidda, awoodda ama aan qabsoomeynin dalagga, xaddiga ama dhibaatada daryeelka. Kala duwanaanshaha, oo laga wada hadli doono, waxay leedahay dhalidda sare, iska caabbinta cadaadiska, kala duwanaanta, daryeel fudud.
Noocyada ugu fiican ee yaanyada ka soo jeeda Siberia
Koonfurta Ameerika waxay hoy u noqotaa yaanyada, midab-yahannadu waxay soo bixiyeen in ka badan 10 nooc, iyo bannaanka u guulaysteen miraha Siberian Siberian sanad kasta, ugu wax soo saar oo ka mid ah ilaa 6 kg oo miro ka mid ah baadiyaha ah xilli. Iyadoo ay ugu wacan tahay xilliga kuleylka adag iyo kuleylaha kulul, oo ay uga mahadcelinayaan shaqaale joogta ah, tamaandhada Siberia waxaa lagu koray beeraha iyo beeraha.
Yaanyo badan oo la yareeyey iyo yaanyo "Star of Siberia"
Xagaaga degmo kasta waxay ku hawlan yihiin beerista yaanyada ee aagaggooda, waxaa la soo xulay noocyo badan oo kala duwan oo ah dhadhan iyo midab kasta. Noocyada ugu caansan waa sahlan tahay in la ilaaliyo oo la siiyo dalag wanaagsan. Mid ka mid ah kuwan waa noocyo yaanyo kala duwan oo leh magaca xiddiga Siberia. Tilmaamo kala duwan Tamaandhada "Star of Siberia" waxay ku haboontahay sharaxaadda noocyo kala duwan oo isku dhexjir ah oo yaanyo ah.
Bareebka hore iyo dhalidda sare: yaanyo kala duwan "Primadonna"
Waxyaabe kasta oo dhakhso ah ama gadaalba leh ayaa laga yaabaa inuu rabo inuu isku dayo wax cusub oo sariirahooda ah. Iyo, dabcan, waxaan rabaa in aan helo natiijada ugu fiican ee dadaalka iyo waqtiga ugu yar. Xaaladda yaanyada, noocyada kala duwan ee "Diva F1" noocyada waxay noqon doontaa isbedel ku habboon ee tusaalahan. Kadib markii dib loo eego sharaxaadeeda iyo sifooyinka aad u fiican, midna ma sii ahaan karo mid aan kala sooc lahayn.
Qoyska kala duwan ee kala duwan ee yaryar
Bannaanka ayaa si joogto ah u raadinaya noocyo kala duwan oo wax soosaar ah oo yaanyo ah, kuwaas oo si toos ah loogu beeray dhulka. Waxyaabaha noocaan oo kale ah ayaa jira - kuwan waa "King of Early" "yaanyada. Sharaxa "King of the Early" - noocyo badan oo srednerosly ah ee yaanyada bislaado hore, kaas oo waa weyn ee beerto ee dhulka u furan.
Tamaandhada "Casanova" waxay ka tirsan yihiin xilliga bartamihii, noocyo sarreysa oo yaanyo ah. Muuqaal kala duwan oo kala duwan oo noocyo kala duwan ah waa qaab miro khafiif ah oo aan caadi ahayn oo yaanyo ah. Dheeraad ah ee maqaalka ah waxaan ka fiirsan doonaa sharaxaad faahfaahsan ee kala duwan iyo sharaxaad ka mid ah miraha, xeerarka warshadaha beeraha iyo goosashada, iyo sidoo kale sababaha tamaandhada "Casanova" si aad ah u jeclaan lahaa inuu bannaanka u, iyo sida loo helo dhalidda ugu sareeya goobta.
Tilmaamaha kala duwan ee yaanyo "Klusha": sharaxaad, sawir, dhalid
Dabeecadda iyo sharaxaada caanaha (Super Klusha) noocyo yaanyo ah kama tegi doono waxyeelo kasta oodhaqeeyaha qudaarta. Dalaggu wuxuu bixiyaa xaddiga aan la qiyaasi karin ee miro yar yar. Beeralay badani waxay jecel yahiin yaanyo kuwaasi oo sidoo kale dareenka hore iyo fududayntii daryeelka. Maqaalkeena waxaan tixgelin doonaa noocyada kala duwan ee faahfaahin dheeraad ah.
Tomato "Truffle Japanese": dabeecadaha iyo sharaxaada kala duwan
Ka mid ah noocyo badan oo beeraleyda casri ah, kuwaas oo ay ku kala duwan magacyada asalka u muuqdaan gaar ah xiiso leh. Sidaa darteed, tusaale ahaan, marka aad maqasheen yaanyo tufaaxa ah ee Japan, waxaad u maleyneysaa inaad ku baraneysid sharaxaadooda iyo astaamaha, taas oo marka dambe u adeegi karta sababo beerahooda.
Tomato "Madaxweynaha": sharaxaad iyo beerista
Way adagtahay in la qiyaaso beerta quruxda leh iyo midhaha dhirta leh ee aan lahayn yaanyo yaanyo ah - dhirbaaxo, oo leh laamaha culus oo ka soo baxa miraha dhalaalaya. Haddii yaanyada noocan oo kale ah ay ku hoos jiraan sharaxaadda riyadaada, markaa waa inaad barataa naftaada "madaxweyne F1". Qeexida iyo astaamaha noocyada kala duwan ee Tamaandhada "Madaxwaynaha" ayaa ah mid hore loo yiraahdo gardarro aan caadi ahayn.
Musqulaha oo koraya noocyo kala duwan oo tufaax ah
Kala duwan yaanyo "Burbur" wuxuu noqonayaa mid aad u xiiso badan. Kala duwanaanshahaan waxaa la dhigay bacdi qarnigii 21aad. Waa sahlan tahay in la nadiifiyo oo aad u dhadhan fiican leh. Waxaanu tilmaamaynaa faa'iidooyinkeeda ugu weyn iyo xeerarka daryeelka caafimaadkiisa. Kala duwanaansho Tilmaamidda Tamaandhada "Burbur", ugu horreyntii waxaad u baahan tahay inaad xasuusato xajmiga dhirta. Waxay gaari kartaa mitir dherer ahaan.
Tamaandhaynta "Openwork F1": noocyo badan oo sarreeya oo kulaylka u adkaysta
Dadka deggan xagaaga iyo beerta, yaanyada sii kordhaya, iyaga oo dooranaya noocyada ugu fiican, mid ka mid ahna waa loo qaddimay "Openwork". Maqaalkani waxaan si faahfaahsan u sharaxnaa dhamaan sifooyinka kala duwan ee noocyada kala duwan ee noocaan ah oo kuu sheegaya sida loo daryeelo. Muuqaal iyo sharaxaad ka mid ah noocyada kala duwan ee miro waxay u bislaadaan sidii hore - goosashada ugu horreysa waxaa la ururiyaa wiigga 15-16aad ka dib muuqaalka caleemaha kowaad.
Tamaandhada "Qalabaynta": dabeecadaha, garashada iyo xayawaanka
Beeralayda iyo dadka guryaha leh ee koraya yaanyada, gaar ahaan iibka, waxay raadinayaan noocyo badan oo tamaandho ah oo ku habboon ujeedooyinkooda - dhalidda, iska caabinta cudurrada, haysashada tayada miraha iyo gaadiidkooda wanaagsan waxay u yihiin muhiim. Tamaandhiga "Evpator" sida waafaqsan dabeecadaha iyo sharaxaadda kala duwanaanta waxay ku haboon tahay shuruudaha.
Yaanyo "Sevryuga": dabeecada iyo sharaxaada kala duwan, sawir
Hufan si fudud u koraan iyo noocyo kala duwan oo aan qabyo ahayn ee yaanyada "Sevryuga" ayaa muddo dheer ku caan baxay dhammaan bannaanka u. Maxay yihiin sifooyinka iyo xooggayaga, aynu eegno aragti dhaw. Faahfaahin kala duwan Magaca labaad ee noocyadani waa "Pudovik". Waxa loogu yeedhaa midho aad u ballaaran oo gaari kara tiro dhan 1 kg.
"Chocolate" yaanyo: sifooyinka iyo sifooyinka sii kordhaya
Noole kasta oo doonaya inuu la yaabo qaraabada ama jaarka uu la mid yahay midhaha shaqadiisa: dhalidda aan caadiga ahayn, qiyaasta cagaaran ee khudaarta ama muuqaalka muuqaalka leh. Dareenkan, noocyada kala duwan ee yaanyada "Shukulaatada" ayaa ku haboon sida kale. Qeexida Tamaandhada Tani waa nooc cusub oo la soo xulay (oo la baddalay qarnigii 21aad), miraha waxay leeyihiin midab khafiif ah oo dhadhan fiican leh.
Qeexida darajada yaanyo "Gacaliga Eagle"
Beeraley kasta oo khibrad leh, sida hiwaayad, wuxuu doonayaa inuu helo noocyo kala duwan oo yaanyo ah oo buuxin kara shuruudihiisa. The Beat Tomato ee Eagle ayaa iska leh kuwan, taas oo ah noocyo miro ah oo yaanyo ah oo si gaar ah loogu soo saaro jilayaal aan u baahnayn daryeel gaar ah. Tixgeli sifooyinka iyo sharaxaadda noocyo kala duwan.
Noocyada ugu fiican ee yaanyada ee gobolka Moscow la sawiro iyo sharaxaad
Si aad u soo ururiso miro badan oo dhadhan fiican leh xilliga dayrta, korriinka khudradda badanaa wuxuu diiradda saaraa dhalidda iyo dabeecadaha dhadhanka ee kala duwan. Si kastaba ha noqotee, shuruudahan ma aha wax kaliya ee lagu xisaabtami karo, sababtoo ah door bidida cimilada ee noocyada kala duwani maaha wax muhiim ah. Heerkulka, qoyaanka, tirada maalmaha qoraxdu waa arrimo wax ku ool ah marka koraan yaanyada.
Tomato Aphrodite f1 sharaxaada kala duwan ee hore
Qiimaha tamaandhada ee cuntadeena maalinlaha ah way adagtahay in la qiimeeyo. Waxay yihiin dhadhan fiican, caafimaad leh, oo ku salaysan iyaga waxaad karin kartaa noocyo kala duwan oo suxuun. Beeraley kastaa wuxuu isku dayaa in uu soo qaado noocyadaas oo keena dalag weyn, si sahal ah u qaataan xididka, waa mid adag oo aan qabyo ahayn.
Wax soo saarka iyo sharaxaadda noocyo yaanyo ah "Red Fig" iyo "Pink"
Maanta, jecel yihiin macaan, oo aan lahayn calaamadaha acid, yaanyada leeyihiin xulasho ballaaran ee alaabta. Hase yeeshe, shaqadu waxay mar walba joojineysaa macaamiisha hannaanka cusub ee xiisaha leh. In this article waxaan ku baran doonaa kala duwan ee yaanyo "Fig", oo leh sharaxaad iyo dabeecadaha casaan iyo casaan ah ee kala duwan. Sharaxaad iyo kala duwanaansho Qaybaha kala duwan waxay magacooda u heleen isbarbardhiggooda dibedda ah oo leh miro qurub-macaan, iyo weliba dhadhanka dhadhanka.
Tomato "Wadnaha geedka": sifooyinka, qarsoonaanta beerashada guuleysiga leh
Tamaandhada waa marti joogta ah oo miiska saaran xagaaga xiliga xagaaga, iyo Eagle Heart waa wakiil qiimo leh oo ka mid ah qoyskan. Sababtoo ah saxarad qaro weyn, noocyada kala duwan ee tamaandhada waxaa loo isticmaalaa maraqa, saladh xagaaga, baradhada shimbiraha ee carruurta iyo diyaarinta yaanyo yaanyo. In this article waxaan ka wada hadli doonaa waxa tamaandhadani aad u fiican, ku saabsan sifooyinka beeritaanka iyo beerista.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Noocyo yaanyo 2019